Dowladda oo canshuur kusoo rogtay shirkado ajanabi ah oo la shaqeysta AMISOM – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda oo canshuur kusoo rogtay shirkado ajanabi ah oo la shaqeysta AMISOM
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeeysay qaaday tallaabo kale oo lagu kordhinaayo awoodeeda, laguna canshuurayo shirkado Ajanabi u badan oo dhex degan xerada Xalane iyo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Waxaa maalintii shalay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde gaaray guddi wasiiro ah oo arrintaan loo xil saaray, waxayna halkaasi kula kulmeen ganacsato ajnabi ah ee muddo sanado ah ku shaqeysanayay gudaha garoonkaas.
Garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka furan baarar, hoteelo iyo xarumo ganacsi oo aanay dowladda federaalka Soomaaliya wax awood ah ku laheyn, balse ay AMISOM iska maamulato.
Shirkadahaan oo tiradooda lagu sheegay illaa 157, ayaa 9 ka mid ah shirkadahaasi u diiwan gashan dowladda Soomaaliya, waxayna dhamaantood qabtaan howlo kala duwan, iyadoo hore loogu fashilmay in shirkadahaasi la diiwan geliyo ama la sharciyeeyo, si ay canshuur u bixiyaan.
Dhinaca kale, wasiirada la kulmay ganacsatadaan ayaa ku wargeliyay inay sida ugu dhaqsiyaha badan isku diiwaan geliyaan, ayna bixiyaan canshuurta ku waajibtay, hadii kale laga qaadi doono tallaabo ay ku jirto in dalka laga saaro.
Guddigaasi wasiirada ka kooban ayaa waxaa kamid ah; wasiirada maaliyadda, warfaafinta, gaadiidka dekadaha, duulista iyo xubno kale, waxaana guddigaasi hore usoo magacaabay golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya.